Ikhaya eli-1BR ePrabhadevi 2mins ukusuka eSiddhivinayak!
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNidhisha
I-Homely 1BR flat in Prabhadevi -Akukho lift kwisakhiwo seflethi kumgangatho we-3. Imizuzu emi-2 uhamba usuka kwitempile yaseSiddhivinayak kunye ne-10 imizuzu ngendlela eya kwiSikhumbuzo saseTata. Inegumbi lokulala eli-1 elinebhedi ephindwe kabini, i-wardrobe kunye ne-AC, igumbi lokuhlambela eli-1 (ibhafu kunye negumbi lokuhlamba lahlukile). Igumbi lokuhlala linendawo yokuhlala, iTV kunye netafile. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo - induction, izitya, ifriji, micro, kettle, umatshini wokuhlamba, itoaster njl. IFlethi inentambo kunye neWIFI. Zonke iiprothokholi zokucoca i-covid ziyalandelwa.
Le ndlu yasekhaya ibekwe ngokugqibeleleyo - kufutshane ne-siddhivinayak (imizuzu emi-2 ukuhamba), isikhululo se-dadar (imizuzu eyi-15 ngendlela), iSikhumbuzo saseTata (imizuzu eyi-10 ngendlela) kwaye imalunga nemizuzu eyi-15 ngendlela ukusuka eLower Parel (kuxhomekeke kwitrafikhi). Ifakwe ngokupheleleyo kwaye ixhotyiswe kakuhle ngokuhlala okufutshane okanye ixesha elide. Ilungele isibini okanye amaqela e-3 ngokuhlala kwabo eMumbai. Igumbi lokuhlala linendawo yokuhlala ekhululekile kunye netafile yokutyela. Inomabonakude onentambo ngokunjalo. I-Wifi iyafumaneka kwaye isimahla. Ikhitshi lixhotyiswe nge- induction, isicoci samanzi, ifriji, iketile, itoaster, imicrowave, izixhobo ezisisiseko kunye nezinto zokupheka. Indawo yokuhlambela kunye negumbi lokuhlambela zihlukeneyo kwaye kukho ilungiselelo lamanzi ashushu kwindawo yokuhlambela. Igumbi lokulala linebhedi ephindwe kabini, ikhabhathi kunye ne-AC. Iflethi ikwaxhotyiswe ngesomisi enwele, intsimbi ngokunjalo. Nceda uqaphele, isakhiwo asinaso i-elevator kwaye iflethi ikumgangatho we-3, iindwendwe kuya kufuneka zikhwele izinyuko. Kwakhona, akukho ndawo yokupaka kwisakhiwo.
Sibonelela ngezi zinto zilandelayo zongezelelweyo kwigumbi lokuhlala ukuze uqalise -
- Iseti e-1 yebhafu kunye neetawuli zesandla kumntu ngamnye
- Iseti e-1 yamaphepha acocekileyo kunye neengubo kwibhedi nganye
-Ikiti e-1 eyamkelekileyo enezinto ezibalulekileyo (isepha, ishampu, intlama yamazinyo)
- Ukucoca kubonelelwa qho ngeveki ngokuncomekayo. Iindwendwe ziyacelwa ukuba zilahle inkunkuma yonke imihla (gcina inkunkuma ngaphandle kweflethi malunga ne-9AM iya kuqokelelwa) kungenjalo itsala izinambuzane. Ukucoca okongeziweyo kuhlawulwa kwi-INR 350 / - ngexesha.
- Iilinen zebhedi kunye neetawuli zitshintshwa rhoqo ngeentsuku ezisi-7 ngokuthotyelwa. Utshintsho olongezelelweyo lwelinen luhlawuliswa kwi-INR 400 / - ngebhedi.
Ngenxa yendawo yesakhiwo, indawo ejikelezileyo ihlala ibhuza. I-Siddhivinayak yimizuzu yokuhamba, isikhumbuzo sikatata siyimizuzu eyi-10 ngendlela, iPalladium / Lower Parel imalunga nemizuzu eyi-15. I-Bandra inokufikelelwa kwimizuzu engama-20 ngekhonkco lolwandle (kuxhomekeke kwi-traffic course). Zonke izinto ozifunayo ziyafumaneka kumgama omfutshane. Igrosari eyimfuneko njl. Iikhebhu zifumaneka lula kanye ngaphandle kwesakhiwo.
Umbuki zindwendwe ngu- Nidhisha
Andizufumaneka ngokwam kodwa iqela lam liza kukuphatha kakuhle.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mumbai